Ministeeroonni Kaatalooniyaa duraanii saddeet Ispeenitti hidhaman. - NuuralHudaa
Ministeeroonni Kaatalooniyaa duraanii saddeet Ispeenitti hidhaman.
Manni murtii Ispeen Ministeeroota Kaatalooniyaa saddeet sababaa labsii Walabummaatti cichaniif kan hidhe tahuu BBC’n gabaase. Ministeeroonni Kaatalooniyaa kunniin ajaja mootummaa Ispeeniin gaafii deebisuuf gara Maadriid kan deeman yoo tahu, abbootiin alangaa mootummaa Ispeen, gaafii akka hidhaman abbaa murtiitiif dhiheessaniin akka ta’e gabaasni kun ni mul’isa.
Haaluma walfakkaatuun Abbaan alangaa mootummaa Ispeen, Prezdaantii Kaatalooniyaa duraanii Karles Pijmonti dabalatee, qondaaltota biroo afur kanneen yeroo ammaa Ispeeniin ala jiran, akka qabamaniif gamtaa Awurooppaa gaafate.
Torbaan darbe keessa Paarlaamaan Kaatalooniyaa Ispeen irraa walaba bayuu eega labsee booda, Mootummaan jiddu galaa Ispeen Paarlaamaa fi Bulchiinsa Kataalaan diguun isaa ni yaadatama.
May 16, 2022 sa;aa 9:58 pm Update tahe